Kildare Farm Foods Open Farm & Shop, toeram-pambolena ankohonana fahatelo, dia misy minitra vitsy miala ny tanànan'i Kildare. Tsy andoavam-bola ny Open Farm, manolotra mpitsidika toeran-tsoa, ​​fianakaviana sy seza misy kodiarana ho an'ny mpitsidika, izay ahitan'izy ireo biby maro karazana amin'ny toerana voajanahary sy milamina.
Ny Farm dia toeram-ponenana biby mahafinaritra sy mahaliana ao anatin'izany; Rameva, ostrich, emu, kisoa, osy, omby, serfa & ondry. Mandehana ny Indian Express Train manodidina ny toeram-piompiana ary henoy ny vaovao farany rehetra momba ny biby.
Tsidiho ny famonoana sy ny aquarium, milalaova Crazy Golf ao amin'ny Indian Creek anaty trano na tsidiho ny Teddy Bear Factory, ho an'ny famandrihana hetsika an-tserasera azafady tsidiho ny tranokala, kildarefarmfoods.com. Ireo hetsika mandritra ny vanim-potoana toa an'i Santa dia raisina an-toerana ihany koa, jereo azafady ny media sosialy sy tranokala Kildare Farm Foods ho an'ny antsipiriany.
Ny Tractor Café dia manolotra sakafo mahasoa ho an'ny fianakaviana, ka na ny sakafo maraina, ny sakafo atoandro na ny kafe tsotra sy ny mofomamy matsiro dia tsy ho diso fanantenana ianao.
Ny Farm Shop dia ankafizin'ny mpitsidika, mivarotra karazan-tsakafo vaovao sy mangatsiaka be dia be nohon'ny safidin-tsakafon'ny mofo nendasina sy confectionery. Ny fizahana amin'ny alalàn'ny dia mahafinaritra foana miaraka amin'ny rivo-piainana namana ary raisina an-tanan-droa.
Sintomy ny fampiharana maimaimpoana ho an'ny vaovao, manokana ary fanavaozana, karohy 'Kildare Farm Foods' ao amin'ny App na Google Play store.
Outdoors, fiantsenana, Fianakaviana ankohonany, Natiora sy Biby, Zavatra maimaim-poana hatao, Vatosoa miafina, trano fisotroana kafe, Kildare
Duneany, County Kildare, Irlandy.
Alatsinainy ka hatramin'ny zoma: 9 maraina ka hatramin'ny 5 alina
Asabotsy: 9 maraina ka hatramin'ny 3 ora
Alahady mihidy sy fialantsasatra ampahibemaso